Soosaarka warqadda Shiinaha warshad wax soo saar iyo warshad | Wode
warqad guddi insole
Cabir: Badanaa 1.00mx 1.50m ama sida waafaqsan macaamilka codsigiisa
Tayada: 555,001,517,608, tayo kala duwan oo xulasho ah
Miisaanka: Kuxiran tayada iyo cabirka, pls nala soo xiriir faahfaahinta
Sumadda: Dayax, Eurotex
Xirxirida: Kiishkiiba 25 xaashi
Wax isbeddel ah ma dhici doono sababtoo ah noocyada kuleylka ama hawlgalka kale ee heerkulka sare, oo ku habboon xawaaraha sare ee warshadaha samaynta kabaha si otomaatig ah.
Manly waxaa loo adeegsaday kiishka iyo kiishka waxsoosaarka shandadda iyo shandadda.
Ku duuban foomka duudduuban, xajmiga duubku badanaa waa 36 "x50m ama 36" x100m dhexroorkiisuna qiyaastii waa 27cm.Beelal balaastig ah oo cad oo PE ah ayaa loo isticmaalaa in lagu duubo duubka. Bacda leh tolmo wanaagsan ayaa la heli karaa haddii loo baahdo.
Tayada 1.High leh qiimo macquul ah.
Waxaan fiiro gaar ah u leenahay faahfaahin kasta oo yar oo laga soo qaatay alaabta ceyriinka ilaa xakameynta kala duwanaanta midabka, illaa gaarsiinta iyo kadib adeegga iibka
3.Warqadda aamusnaanta la dhisay, waxay yareyn kartaa buuqa markii aad jiidanayso daahyada, daahyada ayaa si habsami leh u socda.
1.Waxaan nahay warshad dadaal walba u gasha cilmi baarista, wax soo saarka, iibka iyo u adeegida macaamiisheena.
Waxaan dhameystirnay nidaamka daba galka iibka kadib si aan jawaab uga helno isticmaalka macaamiisha.
3.Si toos ah ula soco qiimaha wershada gacanta koowaad iyo dammaanad tayo wanaagsan macaamiisha.
4.Our suuqyada wax suuqyada waaweyn waa Europe, Bariga Dhexe, South America, Koonfur-bari Aasiya iyo gobollada kale.
1.Sidee baan ku ogaan karaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan alaabtaada?
J: Siyaabo badan ayaa jira: ka taxaddar websaydhkayaga, sidoo kale waxaan kuu soo diri karnaa buug-yaraheena nooca Ingiriisiga ah Iyo inbadan waxaan kaqaybqaadandoonaa Canton Fair ama carwo kale oo ajaanib ah. Marka waxaad sidoo kale booqan kartaa qolkeena. Mahadsanid. Wixii su'aal dheeri ah fadlan fariin noogu reeb bartayada Websaydhka ama toos noola soo xiriir!
2.Q: Sidee loo dalbadaa adiga?
J5: Hal dariiqo ayaa ah inaad noo soo diri kartid faahfaahinta dalabkaaga iibsiga adoo ku soo diraya Email ama Fakis, ka dib waxaan kuu samayn karnaa qaansheegad proforma ah, ka dib waxaad naga bixinaysaa deebaajiga na, ka dib ayaan kuu diyaarinaynaa alaab. Hab kale ayaa ah inaad si toos ah uga dalban karto khadka tooska ah, oo ku siin kara damaanad qaadkaaga caymiska adiga, waa badbaado aad u badan, maadaama ay jirto dhinac saddexaad oo ku siinaya dammaanaddaada si aad u hubiso inaad ka heli karto alaabada codsigaaga.
3.Ma yeelan karnaa Logo ama magaca shirkadda in lagu daabaco alaabadaada ama xirmadaada?
J: Sure. Calaamaddaada waxaa lagu dhejin karaa badeecooyinkaaga iyadoo lagu shaabadeeyo Hot, Daabacaadda, Embossing, UV Coating, Silk-screen Printing ama Sticker.
Hore: Kabaha Insole Shank Board
Xiga: Guddiga Waraaqaha Insole ee Insole
1.75mm Waraaqaha Insole Board Kabaha
2.0mm Paper Insole Board Kabaha
Guddiga Waraaqaha Insole ee Kabaha
Waraaqaha Gudiga Waraaqaha
Guddiga Waraaqaha Insole
Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva
Kabaha Gudiga Waxyaabaha Kabaha Insole ee Kabaha
Guddiga Waraaqaha Insole ee Insole
Kabaha Xaashida Insole, Cirbadda Cirbadda Aan Dhicin, Maro Nonwoven Dahaarka leh Eva xumbo, Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva, Dhar aan Xakameyn oo leh Eva, Guddiga Insole oo leh Eva,